Nei Kuvimbika Kwakakosha Muhupenyu (+ Sei Kuratidza Kwako) - Blog
Ambuya vangu vaigara munharaunda yekumaruwa chinhambwe chingangoti pfuurei awa kubva kumba kwangu. Taimushanyira kwemwedzi yakati wandei, uye mota yemanheru-husiku kudzoka kumba yaititorera munzira dzakawanda dzenyika dzakanyarara.
Zvaive zvisingawanzo kuona chero imwe mota kudzamara tasvika kudhorobha zvakare, uye handifunge kuti ndakamboona mota yemapurisa panguva ipi neipi yataifamba.
Humwe husiku, ndakabvunza baba vangu kuti sei vaigara vachikwenya mabhegi nekumirira pamagetsi emota isu tiri pakati penzvimbo.
Takakomberedzwa neminda yezviyo sezvataive, hazvina kuita sekuti chero munhu angazomboziva kana akangopfura nepakati pemharadzano diki.
Mhinduro yake yaive: 'kutendeseka kunoreva kuita chinhu chakakodzera, kunyangwe pasina anotarisa'.
Ndakafunga nezve chiitiko ichocho kakawanda pamusoro pemakore, ndikaona chinyararire, asi chokwadi chakakosha mumazwi iwayo.
Kuvimbika chaiko kuri kuita chinhu chakakodzera, uchiziva kuti hapana munhu anozoziva kuti wakazviita here kana kwete. - Oprah Winfrey
Kuvimbika, Kuvimba, uye Kuremekedza
Tora nguva yekufunga nezvenguva apo mumwe munhu wawaivimba akakunyengera.
Inogona kunge iri mamiriro apo iwe akabata munhu manyepo , kana iwe wakazoona kuti mumwe munhu akakubira.
Zvichida iwe wakawana mushandi achiba mari, kana kuti imwe yeshamwari dzako yakanyepa kwauri nezve chimwe chinhu chakakosha.
Kunyangwe dai yaive yekuchengetedza manzwiro ako kuti urege kukuvara, zvaive zvakadaro kutengesa , handizvo here?
Kuvimbika kunoda kutendeseka uye 'kwakarurama' maitiro, kunyangwe (kunyanya) pazvinenge zvakaoma kuzviita.
Zvinogona kureva kufamba uchibva pane chinopihwa chebasa kana uchishuva basa nekuti iwe uchiziva kuti zviitwa zvekambani hazvisi pamutemo kana zvisina hunhu.
Zvinogona zvakare kureva kuva nekukurukurirana kwakaomarara nevaya vaunoitira hanya, nekuti ungasarudza kuti vazive chokwadi, uye vazive kuti wakavimbika, kunyangwe kana wataura kana kuita chimwe chinhu chinotyisa.
Chokwadi chakashata chiri nani pane kunyepa kwakanyanya, uye kunyangwe iwe ungazopedzisira waita vamwe vavengi munzira nekuti wanga wakatendeka , zviri kupfuura zvingangoita kuti ivo vacharamba vachikuremekedza iwe nekuti wanga wakatendeseka nezvazvo.
Vanhu vanoziva avo vanorarama nemhando yepamusoro yetsika, uye vanoziva kuti vanogona kuisa ruvimbo rwavo mavari.
Kana iwe uchizivikanwa nekuchengeta zvipikirwa uye kuzvipira, uye uchiita chinhu chakakodzera munzvimbo dzese dzehupenyu hwako, iwe unozokudziridza mukurumbira semunhu chaiye akanaka, akavimbika munhu.
Unogona kusadiwa pane dzimwe nguva, asi ucharemekedzwa. Mune akawanda mamiriro, izvo chaizvo zviri nani.
Izvo Zvakakosha Kune Chero Hutungamiriri Basa
Ndiani waungave nekutenda muna? Mutungamiri anokwezva anokwezva bhurugwa pamunhu wese, asi asinga chengete shoko ravo, kana uyo anobvuma kukanganisa kwavo, asi achichengeta zvaakavimbisa?
Ini ndaizogara ndichisarudza iyo yekupedzisira, uye ini ndiri kufungidzira iwe ungadai futi.
Avo vane yavo nyaya, asi vachishanda nesimba kuti vazadzise zvinangwa zvavo - uye kuchengetedza kuvimba kwevanhu mazviri - zvakakosha zvikuru kupfuura avo vanoputsa mazwi avo nguva nenguva zvakare.
chii chaunonyanya kufarira
Mukuru webasa uyo akatendeseka nezvematambudziko ekuyerera kwemari mukambani achachengetedza kuvimbika kwevashandi, kusiyana neanomanikidza kuti zvese zvifambe zvakanaka, kungopa chete mabhadharo ayo anodzosera.
Mutungamiri anomira nemitemo yavo uye anobuditsa kutendeseka ndiye anozotungamira mauto avo mukukunda. Izvi zvinokodzera mubhoardroom sezvazviri panhandare yehondo.
Avo vanochengeta shoko ravo vanokoshesa huremu hwavo mugoridhe, uye zvinonzwisisika kuti nei vachigadzira vateveri vakazvipira kudai.
Mukupesana, munhu ano 'kukotamisa chokwadi' kuvashandi vavo kana vateveri, kana kukundikana kuchengeta zvivimbiso zvinonetsa kuwana, anorasikirwa nekuvimbika kwevanhu nekukurumidza.
Munhu akangonaka sezwi ravo, uye kana vakakanda pasi mazwi ekuti 'Ndinovimbisa' pazvinenge zviri nyore, asi vachitadza kuita zvakanaka pamhiko idzodzo, munhu angave nekutenda mazviri sei?
Kana vakatyora shoko ravo nezvechinhu chimwe chete, unogona kuva nechokwadi kuti vacharipwanya zvakare mune ramangwana.
Kana vakanyepa pamusoro peizvi, saka ndezvipi zvimwe zvavakanyepa nezvazvo?
Rangarira kuti zviito zvemunhu zvinoratidza izvo zvavari. Kubatwa muchiito chimwe chete chekutengesa kunogona kusunungura umambo hwemunhu nekuti pakarepo zvese zvavakambotaura kana kuita zvakabvunzwa.
Mukurumbira wemakore chiuru unogona kutariswa nemufambiro weawa rimwe chete. - Chirevo cheJapan
Maitiro Ekutora Mutoro Nezve Zviito Zvako Uye Hupenyu Hwako
Maitiro Ekurega Kumhanya Kutiza Kubva Kuneako Matambudziko Uye Uvatarise Iwo NeKushinga Kugadzirisa
12 Zvipingaidzo zvekuve Kufara kwevanhu
Maitiro Ekurega Kunzwa Uine Mhosva Yezvakakanganisa Kare
6 Hunhu hweGamba Rechokwadi
Chokwadi Chinogara Chichiuya KuChiedza
Kunyangwe iwe usine hanya chaizvo kana vamwe vachikuona sewakavimbika kana kwete, pane chinhu chekuzvisarudzira kukudziridza kuvimbika kwaungangoda kuchengeta mundangariro:
Iwe kuda kuwanikwa pakupedzisira.
Munguva pfupi yapfuura, mune rangu basa semupepeti, ndaifanira kudzinga mushandi nekuda kwekubiridzira. Hunhu hwebasa remunhu uyu hwakange hwadzikira zvakanyanya pamwedzi yakati wandei yapfuura, uye nechido, ndakafunga kumhanyisa chimwe chezvikamu zvavo zvakaunzwa kuburikidza neapp yekufananidza.
Zvakazoitika kuti ivo vakasimudza ndima dzese kubva kuWikipedia, vachingochinja izwi rimwe kana maviri kune zvakafanana.
Mimwe mitsara nemitsara zvakange zvatemwa nekunamirwa mazwi kubva kune mamwe masayiti, uye zvakabatanidzwa pamwechete kuva Monster yaFrankenstein iyo isina musoro.
Paakasangana, mushandi akatanga kunyepa nezve mamiriro ezvinhu, ndokuzopa zvikonzero, ndokukumbira achikumbira mumwe mukana. Ivo vaitaura kuti iyi yaive nguva yekutanga kuti vambozviita, uye ivo vaingowana 'husimbe.'
Pakange pasina chikamu changu chaitenda kuti iyi yaive nguva yavo yekutanga kubira. Iyi yaingova nguva yekutanga Ndakanga ndavabata .
Kuziva kuti munhu uyu aisave nehana yekuba basa revamwe vanhu uye kuripfuudza serake, pakanga pasina nzira yandaigona kuramba ndichivatendera kunyorera wandinoshandira.
Kunyangwe dai vaishingaira zvisingaite uye nemoyo wese vakagadzira basa rekutanga kubva musi iwoyo zvichienda mberi, hapana mumwe wedu aigona kuvimba navo zvakare.
Kuve nekuvimbika kunoreva kuti haufanire kutarisa pamusoro pefudzi rako, uchinetseka kuti kunyepa kwako kuchakusvika riini.
Kana uye paunokwenya chimwe chinhu kumusoro, iwe ndiwe wako uye unozvitakura. Hapana zvikonzero. Tsananguro, pamwe, asi pasina kugunun'una kana kukumbira: kungovimbika uye kuzviremekedza.
Wese munhu anokwenenzverwa pane imwe nguva, asi pane musiyano wakakura pakati pekukanganisa kwechokwadi, nekunyengera kwemaune. Imwe kukanganisa kwevanhu, imwe ichakupa kusavimbika zvachose nekusingaperi mumaziso evose vakakukomberedza.
Iwe uri nani pane izvozvo.
Iwe Unoda Kuva Ani?
Iwe unoziva musiyano uripo pakati pehunhu nehunhu?
Mukurumbira waunokudziridza unotsamira pane kuti vamwe vanhu vanofunga kuti ndiwe ani. Hunhu hwako ndiwe zvauri musimboti, zvisinei kuti uri kucherechedzwa here kana kuti kwete.
Saka zvinorevei zvakanyanya kwauri?
Kuva munhu akavimbika zvechokwadi nekuomerera pamisimboti yako? Kana kusundira miganhu kuti uone zvaunogona kubva nazvo usati wabatwa?
Kana iwe ukateerera kumoyo wako uye nehana yako, uye uchivatendera kuti vatungamire mazwi ako nezviito, iwe unoziva kuti uri kurarama nenzira iri yechokwadi kwauri.
Haufanire kumbonyara nezviito zvako, kana kunetseka kuti zvimwe zvakavanzika zverima - iwo mafupa ari muwadhiropu yako - rimwe zuva zvinogona kuwanikwa.
Unogona kuzvitarisa mugirazi uye kudada yezvaunoona ipapo, pachinzvimbo chekutarisa kure nekunyara uye kuzvishora.
Chokwadi, avo vanoreva nhema, vanobiridzira, uye vanoba vanoita sevanobuda pamberi pane dzimwe nguva, asi izvo budiriro zvinowanzo gara kwenguva pfupi.
Ivo vanhu vanowanzo kukomberedzwa nema sycophants uye hongu-varume, pane shamwari dzakazvipira dzinovaitira chero chinhu.
Mukupesana, avo vanorarama hupenyu hwavo nekuvimbika vangangogara vasina hupfumi nguva dzose, asi vanenge vawana ruremekedzo, kuvimbika, kuvimba, nerudo.
Ndeipi nzira iwe yaungade kutora?
Unoda kuva ani?
nhetembo yevakafa vadiwa
sei rudo ruchikuvadza zvakanyanya
zvinhu zvakakosha kuziva nezve hupenyu
Zvinhu gumi zvaunogona kuita kana iwe uchinetseka
sei kugadzirisa hukama hwawakanganisa